Indlu eMckenzie - I-Airbnb
Cave Valley, St. Ann Parish, Jamaica
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJewel
Le ndawo ngamava anzulu asemaphandleni. Iinduli, ilizwe elinzulu, indlela yokuphila yasemaphandleni, idla ngokuthe ngqo kumava omhlaba. Sinikezela ngokukhwela intaba, uhlaza oluchumileyo, umoya omtsha opholileyo, opholisa umoya wasimahla. Phefumla ubutsha bezolimo ezisemaphandleni ezingonakaliswa eJamaica. Singaphosa isidlo sakusasa saseJamaican, esinemveliso ngokuthe ngqo efama.
Ibhasi ifumaneka ngeendleko ezongezelelweyo zohambo oluya elunxwemeni nakwiilokishi ezingabamelwane njengeBrown Town, Discovery Bay kunye neOcho Rios!!
Yindlu enkulu yosapho enendawo yokupheka evulekileyo kunye neyokutyela. Isibonelelo sinokusingatha iisemina zamaqela amancinci, iingxoxo kunye nezinye iziganeko. Le ndlu ikwisithili sokulima esisemaphandleni ukuze iindwendwe zinxibelelane namafama asekuhlaleni kwaye zityelele iifama kwaye zonwabele ukutya okutsha okuvunwe kwindawo.
Sisithili sokufama esinobuhlobo nosapho. Iindwendwe ziya kukwazi ukubona indlela abantu baseJamaican abalinywa ngayo imifuno kunye nezinye izityalo. Baza kuba nakho ukunikela ubungqina kuqala babenendlela yokuphila yasemaphandleni kunye nenkcubeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Jewel
Ndiza kukwazi ukwenza amalungiselelo ohambo kwiilokishi ezikufutshane, ukuya elunxwemeni nakwezinye iindawo ezinomtsalane.